Ngwurugwu Video isii na-ewu ewu na ntanetị maka vidio ndị na-ebi ndụ: UStream, DaCast, Livestream, Kaltura, Ooyala, na Brightcove - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supplier Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +2017 86 SKYPE: lanyue13602420401
home » News » Ngwurugwu Video isii eji ama ama na ntanetị: UStream, DaCast, Livestream, Kaltura, Ooyala, na Brightcove
Ngwurugwu Video isii eji ama ama na ntanetị: UStream, DaCast, Livestream, Kaltura, Ooyala, na Brightcove
:Bọchị: 2017-05-22 / Atiya: News
Cheta ụbọchị mbụ nke Google Video na YouTube? Taa, ka ihe karịrị afọ iri gachara, ọtụtụ ihe agbanweela. YouTube bu ahia di ijeri dollar na nne, onye obula na nne ha na - ebi na ekwenti ha. Anyị ahụwokwa mgbasawanye nke ọrụ nnabata. N'isiokwu a, anyị ga-eme ntụle vidiyo dị n'ịntanetị maka afọ 2017.
Nke mbu, anyi ga - eleba anya n’igwe eji eme ihe eji ama ihe nlere nke ndi oru ihe eji egwu ahia dika YouTube na Facebook. Mgbe ahụ, anyị ga-akọwa ihe dị iche n’etiti ọrụ ndị a na usoro nyiwe vidiyo ọkachamara na ntanetị. N'ikpeazụ, mgbe anyị kọwasịrị usoro anyị, anyị ga-atụba banye na tebụl vidiyo XNUMX kachasị ewu ewu: UStream, DaCast, Livestream, Kaltura, Ooyala, na Brightcove.
Egwuregwu vidiyo na nkwanye ndụ
Egwuregwu kachasị ewu ewu eji maka ikerịta vidiyo na ịnabata taa bụ nyiwe na-elekwasị anya n'ahịa. Ọmụmaatụ, YouTube Live na Facebook Live bụ ndị siri ike. Ọtụtụ ijeri mmadụ gburugburu ụwa na-eji ọrụ ndị a.
Ya mere, ha na-eme nnukwu nyiwe maka ahia na nzute B2C. Egwuregwu ndị a na-enyere gị aka iru ọtụtụ ndị na-ege ntị ma nweere onwe ha iji kpamkpam, ọbụlagodi nnukwu ụlọ ọrụ.
Teknụzụ na-agbasawanye n’obodo a. YouTube na Facebook na-enyezi ha abụọ ọrụ nkwanye ndụ. Agbanyeghị, ha anaghị enye ọtụtụ atụmatụ njiri mara azụmahịa. Ebe ahụ ka ndị ọkachamara na-egwu mmiri na-egwu mmiri na-abata.
OVP ọkachamara na-azụ ahịa
Azụmaahịa chọrọ atụmatụ nke YouTube na Facebook enweghị ike izipụta. E nwere ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti nyiwe ihe ngosi pro na ire ahia. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọbịa vidiyo ndị ọkachamara na-enye atụmatụ nchekwa dị elu, na-eme ka usoro monetization mgbagwoju anya dị, yana ịgụnye ngwaọrụ iji belata njikọta na mmegharị ọrụ ndị dị adị. Ihe njirimara ndị a dabara na mkpa B2B na-ebi ndụ nke ọma karịa usoro nyiwe nke ndị ahịa nwere ike inye.
Ntụle vidiyo dị n'ịntanetị
Ọ dị mfe ịchọta ozi gbasara nyiwe ndị a na ịntanetị, mana oge ụfọdụ ọ bụ ihe mgbe ochie. Iji mezuo nke ahụ, anyị na-ewetara ntụzịaka anyị emelitere maka afọ 2017. O nwere ntụnyere vidiyo dị n'ịntanetị kachasị ọhụrụ ma zie ezie achọpụtara n'ebe ọ bụla.
Ihe data dị na ntụnyere vidiyo a na ntanetị sitere n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Ndị a gụnyere weebụsaịtị ụlọ ọrụ, nyocha onye ọrụ, yana akaụntụ nnwale nke ngwanrọ a na-enwe. Agbanyeghị, o siri ike idobe nkọwa niile. Ọ bụrụ na gị na otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a nọ ma ọ bụ nwee mgbazi, gbaa anyị ozi email ma ọ bụ hapụ anyị okwu anyị ga-edozi ya!
Isi na akụkọ ụlọ ọrụ
OVP mbụ anyị ga-ele anya bụ UStream. Tọrọ ntọala na 2007 iji jikọta ndị otu ọrụ agha na ezinụlọ, UStream zụtara ya site na IBM na 2016 ma na-aghọzi IBM Cloud Video.
Ọrụ arụmọrụ bụ isi
UStream bụ ụlọ ọrụ na - ebi ndụ dị egwu, ọ na - ejikwa faịlụ VOD (Video On Demand) maka iyi iyi gara aga.
Ihe ndekọ mgbasa ozi bụ n'efu, yana mgbasa ozi na-akwado UStream. Ihe ndekọ a kwụrụ ụgwọ wepụrụ mgbasa ozi ma nye ohere ịnweta atụmatụ dị elu. Ihe ndekọ aha ụlọ ọrụ na-enye ohere maka ịre njikwa omenala zuru ezu ma na-enye nchịkọta, ọtụtụ ụzọ ndụ, syndication ọdịnaya na ndị ọzọ.
UStream na-enye nkwado ekwentị maka ndị ọrụ Pro na Enterprise, yana nkwado dabere na ndị ọrụ n'efu.
Njirimara isi okwu
Egwuregwu ojii nke IBM na-enye ma ọkwa nke ndị ahịa yana ụzọ nkwanye ọhụụ nke Enterprise. Ha na-enyekwa nzipu di iche n’ime ha n’ime ha.
Ihe ndekọ Pro sitere na $ 99 ruo $ 999 kwa ọnwa, mana ọ na - ebugote mkpebi mkpebi 720p - nke zuru ezu maka ọtụtụ ndị ọrụ, mana ọ bụghị ha niile. Atụmatụ ịbanye n'ime ụlọ na-enye ohere inyefe HD zuru ezu, mana ọnụahịa ndị ahụ sitere na nkwekọrịta omenala.
Ebe enwere ọfis dị na Paris na San Francisco, DaCast bụ onyinye na-akpata ọgba aghara n’ahịa ahịa jupụtara. Onyinye vidiyo ha bụ ngosiputa zuru oke, nke onwe maka nkwanye ndụ na nkwanye ugwu na VOD.
DaCast na-enye ọrụ nkwanye ndụ zuru oke, yana ntinye vidiyo. Enwere ike itinye vidiyo na ebe ọ bụla ka ị na-ejikwa 100% nke ọdịnaya gị. Ọzọkwa, DaCast na-enye atụmatụ dị ka paywall agbakwụnye, nchedo paswọọdụ, mmachi ntụgharị, yana dashboard nchịkọta.
DaCast dị iche na nyiwe vidiyo ndị ọzọ site na ịnye atụmatụ dị elu na ọnụahịa asọmpi. Ndị a gụnyere mgbasa ozi na-enweghị mgbasa ozi, ọrụ akara ọcha na atụmatụ niile, na Nyefee Akamai CDN. Nkwado ekwentị dịkwa 24/7 maka atụmatụ Pro na Premium site na ndị ọrụ ụlọ.
Ruo uru anyị, e mebere ikpo okwu DaCast ka mma maka iji ya kacha mma. Vision na-eweputa ọwa na-ebi ndụ ọhụụ ma ịmalite iyi ọhụụ.
Ọrụ ọnwa na DaCast bụ ọnụ na ọkwa atọ. Atụmatụ mbido ahụ dị mma maka ndị bịara ọhụrụ na $ 19 kwa ọnwa.
Agbanyeghị, ndị ọrụ azụmaahịa ga-achọ iji atụmatụ a ma ama Pro. Ọ gụnyere nkwado ekwentị na 2 TB nke bandwidth maka $ 165 kwa ọnwa. Atụmatụ a gụnyere gụnyere 5 TB maka $ 390 kwa ọnwa. Enwere bandwidth ọzọ maka ịrịọ maka atụmatụ kwa ọnwa.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị ga-ebinyeghi aka nkwekọrịta, ị nwere ike ịzụta bandwidth iche iche site na “ọnụahịa ihe omume” maka mgbasa ozi otu oge. Ejiri bandwidth a mee ihe ruo otu afọ mgbe azụtara ya.
Ebidobere na 2007 dịka “Mogulus,” Livestream bụzi otu n'ime ụlọ ọrụ na - ebi ndụ kacha ebi nso. Livestream na-achịkwa ihe dị ka nde mmadụ 10 kwa afọ ma na-elekwasị anya na sistemụ ngwaike, ngwanrọ, na ọrụ igwe ojii.
Livestream na-enye nkwanye ọrụ na ntinye vidiyo. Ndị ọrụ nyocha, usoro nchịkwa vidiyo, njikwa nzuzo na ihe ndị ọzọ na-akwado ọrụ a.
A na-akwado nkwado teknụzụ site na email maka ndị jidere akaụntụ dị nkenke, na ekwentị site n'aka ndị ọrụ adịchaghị na ụlọ ọrụ. Atụmatụ ịbanye n’azụmahịa nwekwara ike ịrịọ maka enyemaka na ọzụzụ, nkwado ihe omume, na njikwa akaụntụ.
Livestream weputara onwe ya iche site na inye otutu ihe ngwanrọ na ngwanro maka ịkwanye ugwu. Ihe onyinye ndị a na-agwakọta nke ọma na usoro ha, belata oge dị iche iche na mmejuputa usoro mmemme sitere na ngwaike dị n’elu. Ha na-enyekwa bandwidth ojiji a na-akparaghị ókè, nke bụ ihe pụrụ iche maka ụlọ ọrụ.
A na-ekewa ọrụ site na Livestream gaa ọkwa atọ dị ọnụ ala.
Atụmatụ ebumnuche na-akwụ $ 42 kwa ọnwa, ma tinye nkwanye ndụ na-enweghị mgbasa ozi, nkata agbakwụnye, na ebe nchekwa nchekwa na-akparaghị ókè maka iyi na VOD. Atụmatụ adịchaghị, na $ 249 kwa ọnwa, na-agbakwunye nkwado maka ịkwanye na Facebook Live ma ọ bụ YouTube, itinye mmiri iyi, yana nkwado ndị ahịa na ekwentị. Na ngwụcha, atụmatụ a banyere ụlọ ọrụ dị na nkwekọrịta nkwekọrịta ọ bụla maka ndị ahịa buru ibu. Atụmatụ a na-agbakwụnye mkpokọta akara akara ọcha, nhọrọ monetization, yana API.
Enwekwara atụmatụ efu n'efu, mana ọtụtụ njirimara ahụ adịghị efu.
Site na ntọala njikwa vidiyo na ngwanrọ mepere emepe ha. Kaltura nwere ihe pụrụ iche na-elekwasị anya. Kemgbe ụwa, ha arụ ọrụ na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ.
Ọ bụ ezie na akụrụngwa Kaltura bụ n'efu, ọ chọrọ akụrụngwa nke sava maka Bochum na nkesa. Dika ihe ozo maka ihe nlere nke onwe, Kaltura na enye ndi mmadu obi uto nke igwe ojii na nkesa nke VOD na mmiri iyi.
Kaltura na-enwu ma a bịa n'ihe banyere ike ọ bụla. Akụrụngwa na-emepe emepe nke ngwanrọ ha pụtara na obodo nke ndị ọrụ mepụtara na ịkekọrịta ọtụtụ mgbakwunye na njikọ.
Ihe nlere anya nke Kaltura nwere bu na ikpo okwu nwere ike iju gi anya iji. Site na imirikiti atụmatụ dị iche iche, ọ nwere ike iju gị anya maka ndị na-amalite ọrụ.
Ọ bụ ezie na Kaltura anaghị ebipụta ozi ịnye ọnụahịa na weebụsaịtị ha, onye na-akparịta ụka ụlọ ọrụ na-ekwupụta na atụmatụ ga-amalite n'ihe dị ka $ 1000 kwa ọnwa wee si ebe ahụ pụọ.
Tọrọ ntọala na 2007, Ooyala bụ ntanetị vidiyo dị n'ịntanetị na-elekwasị anya na nnukwu ụlọ ọrụ na-achọ monetize na nyochaa vidiyo. Ha na ụfọdụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ụwa na-arụ ọrụ.
N'elu ikpo okwu Ooyala na-enye ndi oru ohere ikenye vidiyo na choro, jikwaa ọdịnaya, monetize, na nyocha. Ha na-enyekwa ọrụ nkwanye ndụ. Mgbasa Ooyala dị na itinye teknụzụ ọhụụ kọmputa iji mepụta vidiyo a na-ahụ anya. Kemgbe ahụ, ebumnuche ahụ ewerela ha na akụkụ nke mgbasa ozi na mmekọrịta.
A na-ewu Ooyala gburugburu ọtụtụ ngwaọrụ. Ikpokoro isi okwu ha na-enye ohere maka nhazi na nnyefe nke ndụ na vidiyo chọrọ, monetization, na ntinye ọdịnaya. Ooyala Flex bụ ngwaahịa nrụpụta ngwa maka mgbasa ozi na akpaaka, Ooyala Pulse bụ ngwungwu ọrụ mgbasa ozi vidiyo, yana Ooyala IQ bụ ihe nyocha vidiyo siri ike.
Ooyala anaghị ebipụta ozi ọnụahịa. Emebere nkwekọrịta maka ndị ahịa ọ bụla.
Ndabere na Boston Brightcove, nke hibere na 2004, bu otu n’ime ihe egwuregwu vidio kacha ochie na arụ ọrụ. Onyinye ha na-enye n’onyinye na-elekwasikwa anya n’usoro igwe ojii, na-enuba ma na-elele onyonyo.
Brightcove na-enye ọtụtụ ngwaahịa modular, gụnyere Video Cloud hosting, onye ọkpụkpọ vidiyo nke ebili, Ozugbo itinye vidiyo na ntanetị, Live for streaming video, OTT flow for TV TV, Zencoder maka transcoding igwe ojii, na ngwaọrụ maka monetization.
Ọrụ Brightcove dị iche na nke nyocha ha dị mgbagwoju anya na ngwaọrụ ahịa vidiyo. Ngwaọrụ ndị a kachasị mma maka ijide ndị na-eduga na ịghọta ndị na-ege ntị.
Dịka ụlọ ọrụ tumadi na-ebuso ndị ahịa ahịa isi, Brightcove anaghị ebipụta ozi ịnye ọnụahịa na weebụsaịtị ha. Agbanyeghị, ịnwere ike ịkpọtụrụ ngalaba ahịa ha iji nweta nkwupụta ma ọ bụ debanye aha maka ikpe ụbọchị 30 n'efu.
Azụmaahịa vidiyo dị n'ịntanetị dị mgbagwoju anya ma jupụta. Ọ nwere ike bụrụ ihe ịma aka ịtụle atụmatụ ma mee mkpebi dị mma. Agbanyeghị, ntụnyere vidiyo a na ntanetị ga-enyere gị aka wedata nhọrọ dị n'ahịa ahụ dabere na mkpa gị ụfọdụ. Chetakwa na mgbe ị na-atụnyere OVPs, ịnwere ike ịnwale ha oge niile site na nnwale ha n'efu. Ka ọ dị ugbua ọ bụrụ na inwetabeghị, nwalee usoro ntanetị vidiyo anyị n'ịntanetị maka ụbọchị 30 n'efu wee hụ ma ọ dabara na mkpa azụmahịa gị.
N’ime mgbanwe TV na asọmpi asọmpi dị egwu, ndị ọrụ na ndị na-eweta TV ga-eweta ohere ịnweta ọdịnaya niile na ihuenyo, n’oge ọ bụla, ebe ọ bụla, ebe ha na-ebelata ịdị mgbagwoju anya na arụmọrụ ụgbọ ala gafee ebe niile. Na Ihe nchekwa FMUSER FBE200 Ezubere iji lebara ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu maka nnyefe vidiyo na ịntanetị na ngwaọrụ mkpanaka.
«Nke gara aga: Etu aga-esi Mee 3KM-5KM mkpuchi mgbasa ozi FM.
Etu esi eji IPTV Encoder mee ihe Nweta Mgbasa Ozi Ntinye Aka na Ntanetị? :Osote "